Aသွေးပိုင်ရှင်တို့အတွက် ဂျပန်ကဗျာ - JAPO Japanese News
ဂါ 21 Jan 2020, 12:00 ညနေ
ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာ သွေးအမျိုးအစားတွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိကြပါတယ်။ နက္ခတ်ဗေဒင်ကြည့်သလိုမျိုး ဇာတာခွင်အလိုက် ကံကြမ္မာကြည့်သလိုပါပဲ။ ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာလည်း သွေးအမျိူးအစားအလိုက် လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကိုကြည့်ကြပါတယ်။ သွေးအမျိူးအစားကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်နဲ့ သဟဇာတဖြစ်မဖြစ် ကိုလည်း ခန့်မှန်းနိုင်ပါတယ်တဲ့။
ပထမဆုံးတွေ့ဆုံကြတဲ့အခါ သင့်ရဲ့ သွေးအမျိုးအစားကိုမေးကောင်းကြဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။သူတို့တွေကသင့်ရဲ့ သွေးအမျိုးအစားကိုသိပြီဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို အနည်းနဲ့အများ ခန့်မှန်းလို့ရတယ်တဲ့။
ဂျပန်မှာ Aသွေး (39.8%) Oသွေး(29.9%) Bသွေး19.9% ABသွေး(9.9%)ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှာအများဆုံးသွေးအမျိုးအစားက Aသွေးပေါ့။
အများအားဖြင့်Aသွေးတွေဟာအဖွဲ့ဝင်ကောင်းတစ်ယောက်၊ စိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရလေ့ရှိတယ်။ ဒီလိုစိတ်နေသဘောထားရှိတဲ့သူတွေကိုတော့ ကုမ္ပဏီတွေကအရမ်းလိုလားကြပါတယ်။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အေသွေးတွေက တခြားသူတွေအတွက်စိတ်ပူပန် စဉ်းစားပေးတတ်ပြီး ကြင်နာတတ်ကြလို့ပါ။ ဒါပေမယ့်တချို့သူတွေကပြောကြတယ် အေသွေးတွေက သူ့တို့ကိုယ်သူတို့ပဲကောင်းပြီး အရာအားလုံးကိုသိုသိုသိပ်သိပ်နေတတ်ကြတယ်တဲ့။ဒါ့ကြောင့်လဲ သိုသိပ်တာတွေများပြီး တခါတလေပေါက်ကွဲတာနေမှာပေါ့နော်။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့အမေပြောပြဖူးတယ်။ သူ့သမီး Aသွေးပိုင်ရှင်အကြောင်းကိုပေါ့။
“ သမီးက လူတိုင်းကိုပျော်စေချင်လို့ ကြိုးကြိုးစာစားနဲ့အလုပ်လုပ်နေတာ၊ အကယ်၍ထင်ထားသလိုသာဖြစ်မလာခဲ့ရင် သမီး အရမ်းစိတ်ညစ်မိမှာ” ဆိုပြီး စိတ်တွေလှုပ်ရှားကာ “အိုး ! ငါဘာတွေလုပ်နေတာလဲ၊ ငါတကယ်ကိုအရူးပဲ၊ ငါတော်တော်ဆိုးတာပဲ” ဆိုပြီးရေရွတ်နေပါတော့တယ်။ သူမရဲ့အမေ Oသွေးပိုင်ရှင်ကတော့ သူမ အဲလိုဖြစ်တိုင်း ရယ်လျက် “နင်ကတကယ့်ကို အေသွေးပဲ” ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ သူမက “သမီးသိပါတယ်၊ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း Aသွေးဖြစ်နေလို့မကြိုက်ဘူး။” လို့ပြန်ပြောပါတယ်။ သူမရဲ့အဖြစ်အပျက်ကရယ်ဖို့တော့ကောင်းပါတယ်။ မဖြစ်သေးတာကိုအစိုးရိမ်လွန်နေတာကိုး. . . Aသွေးအများစုကအပြစ်ပြောဖွယ်မရှိအောင်စေ့စပ်သေချာတဲ့သူဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါတယ်။ အဲလိုကြိုးစားမှုတွေကိုလည်း တခြားသူတွေဆီက အသိအမှတ်ပေးတာကိုလည်းလိုချင်ကြပြန်ပါတယ်။
သည်းခံတတ်တာကတော့ ငါ့ရဲ့ အကျွမ်းကျင်ဆုံး
ငါ့ရဲ့ ၈၀%က Stressတွေပါ
ဒါပေမယ့် တစ်ခုခုကိုတော့ အမြဲတွေးနေတတ်တယ်
ခံရရင်တော့ တစ်လလောက်တော့ ငါခံစားနေတာ
ဒါပေမယ့် ငါကတော့ စိတ်ပူလို့ကိုမပြီးနိုင်တာပါ
ဟေး မင်းက ဘီသွေးလား?
သူတို့က တာဝန်မသိတတ်တဲ့ လူပျင်းတွေ
ကြည့်ရတာ Aသွေးတွေက စိတ်ဖိစီးမှုတော်တော်များတဲ့ပုံပဲနော်… သင်က Aသွေးပိုင်ရှင်ဆိုရင် ဒီကဗျာကို လက်ခံရဲ့လား ?
Miyazaki ခရိုင် Kobayashi မြို့က “ အမဲသားစိတ်ကြိုက်ယူလို့ရတဲ့အစီအစဥ်” ကိုစတယ်တဲ့!
TOYOTA ဥက္ကဌ ရဲ့ မိန့်ခွန်းကျွမ်းကျင်မှု